Sida Loogu Cadaadiyo Faylka PDF-ka Adobe | Martech Zone
Sanadihii ugu dambeeyay, waxaan ka faa'iideysanayay wax weyn qalab saddexaad ah oo ku cadaadinaya faylalka 'PDF' loogu isticmaalo internetka. Xawaaruhu had iyo jeer waa shey khadka tooska ah ku jira, sidaa darteed haddii aan u dirayo feyl PDF ah ama aan martigelinayo, waxaan doonayaa inaan hubiyo in la isku koobay.
Maxaa Loo Cadaadinayaa PDF?
Cadaadisku wuxuu qaadan karaa feyl ah megabyte badan wuxuuna hoos u dhigi karaa dhowr boqol oo kilobyte, taasoo sahleysa in lagu gurguurto matoorada raadinta, taasoo ka dhigeysa mid deg deg ah soo dejinteeda, waxayna sahlaysaa ku xirnaanta iyo ka soo degsiga emaylka
Mararka qaarkood macaamiisha waxay i weydiiyaan waxa dejineed ee ugu fiican ee riixitaanka PDF… laakiin aan khabiir ku ahayn isku-xojinta iyo dejinta dhoofinta, si daacadnimo ah uma haysto fikrad aan ka bilaabo. Haddii aad tahay qof aqoonyahan ah oo fahmaya CCITT, Flate, JBIG2, JPEG, JPEG 2000, LZW, RLE, iyo ZIP setin settings Waan hubaa inaad ogaan karto. Waxaa jira tan maqaallo ah oo halkaa yaal.
Waxaan doorbidi lahaa kaliya inaan isticmaalo qalabka wax lagu riixo si aan shaqada u qabto. Mahadsanid, Adobe ayaa bixisa intaas uun!
Sida loo cadaadiyo PDF ah Adobe Acrobat
Waxa aanan fahmin waa tan Adobe Creative Cloud liisanka ayaa horey loogu soo daray qalab wax lagu riixo oo laga dhex dhisay Acrobat, barnaamijka Adobe ee tifaftirka, qaabeynta, iyo iskuxirka PDF-yada. Haddii aad soo dejiso Acrobat, waxaad si fudud u cadaadin kartaa PDF-gaaga:
Fur PDF gudaha Acrobat DC.
Fur fur Tayadoow PDF qalab lagu cadaadiyo dukumiintiga PDF.
Dooro Qalabyada> Tayadoow PDF ama guji aaladda dhinaca midig.
Dooro Yaree File Size liiska kore.
set waafaqid ee Acrobat nooca oo guji OK. Default wuxuu noqon doonaa nooca jira.
Dooro Sare u qaadista Sare Liiska sare si aad ugu sameyso cusbooneysiin ku saabsan muujinta sawirka iyo farta. Guji OK markaad dhammaystirto.
Dooro Fayl> Keydso Sida. Hayso isla magaca faylka si aad uguqoro faylka hadda jira ama aad ugu magacawdo faylka cusub cabbirka PDF ee yar. Xulo goob oo guji Badbaadi.
Sida loo cadaadiyo PDF leh Adobe Online
Haddii aad leedahay Adobe Creative Cloud liisanka, xitaa uma baahnid inaad soo dejiso Adobe Acrobat si aad u cadaadinaysid PDF-yadaada! Adobe wuxuu leeyahay aalad internetka ah oo aad isticmaali karto!
Kaliya gali PDF iyo Adobe ayaa isku cadaadin doona oo soo dejin doona. Wanaagsan oo fudud!
Ku cadaadi PDF Online
Tags: acrobat dcadobeadobe acrobatadobe cloud CloudAdobe onlineCCITTcadaadi pdfdejinta riixoFidiJBIG2jpegJPEG 2000LZWpdfriixitaanka pdfRLE